Ufuna iirhafu ze-Intanethi ekhaya? Gcina ngenqanaba lakho ngezi zibonelelo | Iindaba zeGajethi
Amaxabiso e-Intanethi ukuhamba kunye nokugcina
Kungekudala, iinketho xa uqesha i-intanethi zazimbalwa kakhulu. Ukucotha konxibelelwano lwe-ADSL olusenze sanqwenela ukuzama ukufikelela kwiphepha lewebhu. Ngethamsanqa, iinethiwekhi ze-Intanethi ziphuculwe kwaye ngoku zifikelela kwizantya ezifikelela kwi-1Gb. Kodwa njengesiqhelo, ukhetho oluninzi onokukhetha kulo, kokukhona kunzima ukufumana ukhetho oluyinyani ngokwenene into esiyifunayo kwaye esivumela ukuba siyigcine. Ke ngoko, namhlanje siza kwenza uthelekiso phakathi kwezona zinga zibalaseleyo ze-intanethi ukusefa ekhaya kwaye ugcine ngexesha elifanayo.
Esona sipho silungileyo: Ifayibha yasekhaya 100Mb Orange
Ixabiso eliphantsi: Kusebenza kuphela ifayibha
Elona zinga lipheleleyo: I-100Mb Fibre engaphezulu kweselfowuni
Elona zinga liphezulu le-intanethi: Ifayibha yeYoigo engama-100Mb
Ngoku ekubeni sisazi ukuba ukuqesha i-intanethi ekhaya ngaphandle kokulungiswa, ngexabiso eliphantsi kwaye ngaphandle kwesigxina kukhetho olukhoyo ngoku, lixesha lokuba ungene kulo mbandela kwaye uhlalutye nzulu inqanaba ngalinye elinikezelwa ngabaqhubi. Sele ulungele?
IMovistar Idibanisa i-300Mb Movistar 300Mbps € 38 / ngenyanga
Lowi Ifayibha 100Mbps € 29.95 / ngenyanga
IVodafone Fiber 300Mb 300Mbps € 30.99 / ngenyanga
Ifayibha yasekhaya 100Mb Orange 100Mbps € 30.95 / ngenyanga
I-100Mb Fibre esuka eMásMóvil 100Mbps € 29.99 / ngenyanga
Ifayibha yeYoigo engama-100Mb 100Mbps € 32 / ngenyanga
Ifayibha engama-100Mb eneefowuni zeJazztel 100Mbps € / ngenyanga
1 Lowi, ukhetho kule Vodafone OMV
2 IMásMóvil kunye nexabiso layo eliphantsi lefayibha
3 Amaxabiso eFibra yaseKhaya
4 IJazztel kunye namaxabiso ayo amatsha efayibha
5 I-300 Mb ukuhamba kunye neVodafone
6 I-100Mb kuphela yefayibha yokulinganisa kunye neYoigo
Lowi, ukhetho kule Vodafone OMV
Kude kube kutshanje, uLowi yenye yezona ndlela zibalaseleyo ukuba sifuna ukuqesha i-Intanethi ngexabiso eliphantsi. Isebenza phantsi kwenethiwekhi yeVodafone, ngaphandle kokuba uhlala kwindawo efihliweyo, unokuxhamla kukhuseleko lwefayibha ngaphandle kwengxaki. Ixabiso li-euro ezingama-29,95 kuphela ngenyanga, kuba lelona nqanaba libiza kakhulu kwimarike.
Kwaye ukuba ixabiso libonakala liluncedo oluncinci, kusekho okungakumbi. Eli nqanaba alinasigxina, kungoko sinokuhla okanye sitshintshe nangaliphi na ixesha ngaphandle kokoyika izohlwayo okanye izohlwayo. Kwaye abayi kuhlawulisa ufakelo okanye mboleko yomzila. Ukuba emva kokufunda iinkcukacha zenqanaba lefayibha ka-Lowi awunakulinda unxibelelwano lwakho ekhaya, unayo kuphela fikelela kweli khonkco ukuze ungene kwinkonzo yakho.
IMásMóvil kunye nexabiso layo eliphantsi lefayibha
Umsebenzisi ophuzi uzimisele ukuguqula ixabiso lentengiso. Okwangoku, kubonakala ngathi kukwindlela elungileyo njengoko ifayibha kunye ne-ADSL iminikelo iphakathi kwexabiso eliphantsi. Nge- € 29,99 kuphela ngenyanga esinokonwabela i-100Mb fiber kunye neefowuni ezingenamda ezivela kumnxeba wasekhaya.
Kule ntlawulo yenyanga ngexabiso asizukufuneka songeze enye into kuba ukufakelwa kunye ne-router simahla kubhaliso olutsha. Kodwa ukuba kufuneka sazi ukuba sineenyanga ezili-12 sisebenza ngokusisigxina, ke ukuba sifuna ukutshintsha ireyithi phambi kokuphela kweli xesha, kuyakufuneka sihlawule isohlwayo. Sishiya eli khonkco ukuba lenze ngokukhawuleza.
Amaxabiso eFibra yaseKhaya
Ukujonga kwikhathalogu ye-Orenji, safumana amaxabiso eFibra yasekhaya ukuqesha i-intanethi ekhaya kwaye ayikho enye into. Ezi ntlawulo zilungele abo bafuna ukugcina ireyithi yabo ehambayo ngaphandle konxibelelwano lwabo ekhaya kwaye bajonge nokwehla kwexabiso eliphantsi. Ngokukodwa, kubandakanya iifowuni ezingasikelwanga mda kwiindawo zomhlaba kunye nemizuzu engama-1000 ukubiza iimfowuni. Ngeliphi ixabiso? Ilungele i- € 30.95 ngenyanga yonke into.
Ke ukuba sifuna ifayibha egubungele iOrange, kungcono ukuba singacingi ngayo. Qesha eli nqanaba ngokukhawuleza nangokulula ukusuka apha.
IJazztel kunye namaxabiso ayo amatsha efayibha
Emva kokuhlamba umfanekiso, iJazztel icebise ukutshintsha ireyithi yefayibha esinokuyifumana. Ngaphezulu kwako konke, ukuba amaxabiso eorenji akasisiqinisekisi, kuba basebenza phantsi kwenethiwekhi efanayo. Ukuba kufuneka sicebise kuphela inqanaba le-intanethi ukusuka kwifayile ye-. I-Jazztel, enye yezona zinto zilungileyo ziya kuba lixabiso nge-100Mb yesantya sokulinganisa ifayibha kunye neefowuni. Singawusebenzisa umnxeba wasendlwini ngaphandle koloyiko lokunyusa izinga lethu, kuba ikwabandakanya iifowuni ezingasikelwanga mda nangaliphi na ixesha kunye nomqhubi.
Intlawulo yakho yenyanga yi-28,95 euro ngenyanga, kodwa ngoku sinethamsanqa. Into ekufuneka siyigcinile engqondweni ukuba sicinga ngokutshintsha unxibelelwano lwe-intanethi ekhaya. Ukucela ulwazi oluthe kratya okanye ukwenza ikhontrakthi enye yeerhafu zayo, awuzukuyenza enye into ngaphandle kokufikelela eli khonkco.
I-300 Mb ukuhamba kunye neVodafone
Ukuba sifuna ukwenza ikhontrakthi kwi-intanethi kunye nabaqhubi abaqhelekileyo ukunqanda iingxaki zokugubungela, asinakulibala malunga neVodafone kunye nefayibha yayo ye-ONO. Sinamazinga aliqela esinokukhetha kuwo, kodwa ukuba sifuna ukungachithi kakhulu ngexesha elinye isantya esifanelekileyo se-intanethi, elona zinga lililo ngokungathandabuzekiyo Ifayibha Ono 300Mb.
Eyona nto intle kukuba eli nqanaba linesibonelelo kwimirhumo yenyanga yeenyanga ezingama-24, apho siza kuthi sihlawule kuphela i-39 yee-euro, ukugcina ngaphezulu kwama-euro angama-200. Ukuze ungaphoswa sesi sibonelelo, konke okufuneka ukwenze kukuba fikelela kule khonkco ukuze uyiqeshe ngoku.
I-100Mb kuphela yefayibha yokulinganisa kunye neYoigo
Oko uYoigo wasungulwa kwimakethi yenqanaba lefayibha, ukhetho lwezoqoqosho xa kuqeshwa luye lwanda. Kumaxabiso amathathu anikelwayo, thina sicebisa eliphakathi kunye ne-300Mb, ngakumbi kwixabiso kunye nesantya.
Kufuneka siqaphele ukuba eli nqanaba unokuhlala iinyanga ezili-12 kwaye esona sohlwayo siphezulu sokuhlawula ukuba asithobeli i-euro ezingama-100. Kwaye ungakhathazeki, kuba ubhaliso kunye nofakelo lusimahla kwaye ngekhe ubize ntlawulo kwi-invoyisi yezi ngcamango. Ukuba unomdla kweli nqanaba, ungayiqesha kwi-Intanethi kule linki ngokukhawuleza.
Njengoko sele ubonile, zininzi iindlela esinokukhetha kuzo xa kufikwa kumba wokuqesha i-intanethi ekhaya. Kwaye ngaphezu kwako konke, ukhetho oluninzi oluvumela ukuba sigcine. Ngoku ukuba uyazi ezona zinto zibonelelweyo zangoku kwiimarike amaxabiso e-intanethi, ezona zintsalela zinzima. Khetha ukuba yeyiphi inkonzo oza kuyiqasha. Ukuba awukaqiniseki, unethuba lokundwendwela Umthelekisi weerandi kwaye ufumane oko ukufunayo.